कस्ले गर्यो ? एकै रात जुम्लाका दुई स्थानीय तहमा आक्रमण
जुम्ला । यहाँका दुईवटा स्थानीय तहमा गयराति आक्रमण भएको छ । अज्ञात समूहले जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिका र गुठिचौर गाँउपालिकामा शनिबार राति आक्रमण भएको हो । आक्रमणबाट नगरपालिकाको गाडी जलेको छ ।..
काठमाडौं । पूर्वउपसभामुख पूर्णाकुमारी सुवेदी दम्पतिले एकल भएकी जेठी बुहारीलाई छोरीका रुपमा विवाह गरेर पठाएका छन् । संघीय सांसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति रहेकी सुवेदीले जेठी बुहारी मालती..
काठमाडौं । सरकारले सेनामार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘विलासी’ गाडीको सेट नै खरिद गर्ने भएको छ। औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा चढ्ने, अनौपचारिक रूपमा उपयोग गर्ने, सुरक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्नेसहित आठ गाडी किन्ने तयारी..
नेपाल प्रहरीका ४५५ इन्सपेक्टरको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४५५ जना इन्सपेक्टरको सरुवा गरेको छ । प्रहरी महानिरक्षकको निर्णय अनुसार शुक्रवार प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत..
हिटलर र एक यहुदी बालिकाबीच दोस्ती, यसअघि कसैले नदेखेको तस्बिर
बीबीसी । एक बालिकालाई अँगालो हालिरहेका यी व्यक्तिको तस्बिर निकै सुन्दर छ । तर सन् १९३३ मा लिइएको यो तस्बिरको कहानी भिन्न छ । तस्बिरमा जो व्यक्ति देखिएका छन् तीमध्ये..
जसको नाममा पैसा आयो उसैलाई पत्तो छैन, आउने करोडौं रकम कहा जान्छ सरकार ?
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको ‘स्टेटमेन्ट अफ टेक्निकल एन्ड अदर एसिस्ट्यान्ट’ पुस्तिकामा मानवअधिकार आयोगको ‘शान्ति, अधिकार र सुशासन कार्यक्रम’ का लागि आव २०७३/०७४ मा डेनमार्कले ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध..
प्रस्तवित राजदूत शाक्य प्रधानमन्त्री ओलीकी ‘साली’ नै हुन् त ?
यो मन्दिर, यो मस्जिद, यो चैत्य, यो गुम्बा मलाई छ प्यारो साधै आफू भन्दा बोलको चर्चित गीतकी गायिका हुन् शाक्य । साथै प्रदेश ३ का नेकपा (तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित) का सांसद अजयक्रान्ति..
राज्य विप्लवको मुद्दा खेपेका सीके राउतलाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गरायो
काठमाडौं । राज्य विप्लवको मुद्दामा पक्राउ परेका सीके राउतलाई सर्वोच अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएपछि सर्वोच्चले ५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । विहीवार बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा..
काठमाडौं । सरकारले इजरायल र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। योसँगै सरकारले इजरायलका लागि नेपाली राजदूतमा अन्जान शाक्यलाई सिफारिस गरेको छ। गत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयबारे..
बेरोजगारको नाममा ठूला व्यापारीलाई ५० करोडसम्म
काठमाडौं । विपन्न तथा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन भन्दै ‘युवा स्वरोजगार कोष’ मार्फत सरकारले गरेको अर्बौँ लगानी उपलब्धिविहीन भएको छ। ०६५ देखि ०७४ सम्म कोषको नाममा सात अर्ब २७ करोड रुपैयाँ..
काठमाडौं। दशैंअघिबाट बन्द रहेको सवारी चालक अनुमती पत्र (लाइसेन्स) को आवेदन मंसिर ७ गतेबाट खुल्ने भएको छ। मंसिर ७ गते १० बजेबाट अनलाइन फाराम खुल्ला गरिने यातयात व्यवस्था विभागका निर्देशक तीर्थराज..
बाबुआमालाई घरमा नराख्ने छोराछोरीलाई अब जेल सजाय
काठमाडौं । के तपाईंले आफ्ना वृद्ध आमा–बाबुलाई हेला गरेर दुःख दिनुभएको छ रु यदि आफ्ना बुबा–आमालाई अपमानित गर्ने, दुःख दिने, घरबाट निकाला गर्ने, सडकपेटीमै बेवारिस अवस्थामा छाड्ने गर्नुभएको छ भने..
मन्त्री पदबाट स्थापितपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सोडारी बर्खास्त
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ । पद अनुकुलको आचरण नगरेको र पटक पटक पार्टीको सुझाव अटेर गरेको भन्दै उनलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्री..
नेकपा दक्षिण एशियाकै ठूलो पार्टी : खनाल
इलाम । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका बरिष्ट नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी दक्षिण ऐशियाकै ठूलो पार्टी भएको बताएका छन । बडादशैँ, दीपावली, नेपाल सम्बत् र छठ पर्वको अवसरमा..
अब छोराछोरीको कमाइको १० प्रतिशत आमाबाको बैंक खाता राख्नै पर्ने
काठमाडौं । तपाईं सरकारी वा निजी संस्थामा काम गर्नु हुन्छ रु अनि आमाबाको लालनपालनको दायित्वबाट पन्छिनु भएको त छैन ? अब भने कानुनले नै तपाईंलाई जिम्मेवार बनाउँदैछ। सार्वजनिक पदधारण गरेका..
‘निर्मलाका हत्यारा नभेट्ने बहुमत सरकार डाडुभरी पानीमा डुबेर मर्नू : बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका बाबुआमा धर्ना बसेपछि नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले सरकारप्रति चर्को टिप्पणी गरेका छन्। निर्मलाका बाबुआमा धर्नामा बस्न बाध्य हुनु दुई..
अमेरिकाको चुनावमा धाँधली, फ्लोरिडामा पुनः मतगणना
संयुक्तराज्य अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको सिनेट र गभर्नरको मतगणनाको नतिजा सार्वजनिक भए पनि यहाँ पुनः मतगणना हुँदैछ। अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा निकै महत्वका साथ हेरिएको फ्लोरिडाको चुनावमा धाँधली भएको डेमोक्र्याट्स पार्टीले आरोप..
अमेरिकामा भयंकर आगलागी, नौजनाको मृत्यु, उत्तरी क्यालिफोर्नियामा ९० प्रतिशत भवन ध्वस्त
एजेन्सी । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको जंगलमा भीषण आगलागी हुँदा नौजनाको मृत्यु भएको छ भने ३५ जना बेपत्ता भएका छन् । देशको अग्निशमन निकायका अनुसार, आगोका कारण हजारौं भवन ध्वस्त भएका छन्..
प्रचण्डले जन्म र मृत्यु संस्कारमा २० किलो चामल दिने घोषणाको के छ हाल ? हेर्नुहोस
सुर्खेत । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कर्णालीका नागरिकको जन्म र मृत्यु संस्कारमा २० किलो चामल दिने घोषणा गर्दा निकै आलोचना भयो। प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणाले केही समय कर्णालीमा तर्कवितर्क, वादविवाद,..
भोली आइतबार यी स्थानीय तहहरुले दिँदैछन् सार्बजनिक बिदा
बनियानी। झापाको दमक नगरपालिकाले आइतबार फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। नगरपालिकाको नगरसभाबाटै फाल्गुनन्द जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीले जानकारी दिनुभयो। “राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दको..
कौडा खेल्न नदिएको भन्दै प्रहरीमाथि आक्रमण, ४ राउण्ड हवाई फायर
दैलेख । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकको मुख्य बजारमा सडक नै अवरुद्ध हुने गरि कौडा खेलिरहेका समूह र प्रहरीबीच झडप भएको छ । कौडा खेल्न अवरोध गरेको भन्दै उक्त समूहले प्रहरीमाथि ढुंगा..
बैँकक भन्दै अमेरिका पुगेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको समाचार लेख्‍ने पत्रकार न्युयोर्कमा कुटिए
न्युयोर्क । उपचारका लागि बैँकक जाने भन्दै नेपालबाट उडेर कसैलाई थाहै नदिई अमेरिका पुगेका प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकार न्युयोर्कमा कुटिएका छन्। हाल न्यूयोर्कमा रहेर पत्रकारिता..
बाँके । अब्दुल वाहिद मन्सुरी ‘चुन्ना’ मुस्लिम समुदायका व्यक्ति हुनुहुन्छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रथम उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका चुन्ना मुस्लिम भए पनि हिन्दूका हरेक चाडबाडमा रमाउने गर्नुहुन्छ । नेपालगञ्जका रैथाने..
आफ्नै ज्योतिषले दिएको ९ बजेर ५० मिनेट कैं साइतमा लगाए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भाइटीका
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले विहान ९ बजेर ५० मिनेटमा भाइटीका लगाएका छन् । पूर्वराजा शाहले बहिनी शोभा शाहीको हातबाट भाइटीका लगाएका हुन् । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले भाइटीकाका उत्तम साइत..
चिनियाँ चमत्कार ! अब टेलिभिजनको समाचार रोबटले पढ्छ
हलो ! तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, इंग्लिस न्यूज प्रोग्राम टाइ सुट लगाएका अंग्रेजी बोल्ने एंकर आफ्नो पहिलो रिपोर्ट यसरी प्रस्तुत गर्दैछन् तर, उनी मानिस भने होइनन् । हो, चीनको सरकारी न्यूज एजेन्सी सिन्ह्वाले..
टीका लगाउँदा दाजु-भाइलाई कस्तो मिठाइ खुवाउने ?
काठमाडौं। यतिबेला नेपालीहरू दोस्रो महान चाड तिहारको माहोलमा रमाइरहेका छन् । तिहारको विशेष दिन भाइटीका हो । भाइटीकाको दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई सप्तरंगी टीका लगाउने र मीठामीठा परिकार खुवाउने चलन रहेको..
आज भाइटीकाको उत्तम साइत ११ः५५ बजे, टीका लगाउने र लगाइदिने कता फर्कने
काठमाडौं । यमपञ्चक अर्थात् तिहारको पाँचौँ दिन आज भाइटीका पर्व दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्पराअनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका..
भोलि भाइटीका उत्तम साइत ११ बजेर ५५ मिनेटमा
काठमाडौँ । यमपञ्चक अर्थात् तिहारको पाँचौँ दिन भोलि भाइटीका पर्व दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्पराअनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका..
धन कमाउने ५ सरल उपाय: मंगलवार ऋण तिर्नुहोस्, बुधवार उदारो नदिनुहोस्
ज्योतिषशास्त्रमा बताइएका अनेकथरी उपाय अपनाउँदा सबै किसिमका मनोकामना पूरा हुन्छन् । यहाँ हामी केही सरल उपाय बताउँदैछौं जसलाई अपनाउँदा तपाईंले धन कमाउन सक्नुहुन्छ । १. घरकी प्रमुख महिलाले बिहानै सूर्योदयअघि नै..
हिन्दू शास्त्र अनुसार समुन्द्र मन्थन भन्दा पहिला स्वर्गका देवताहरु निर्धन भएका थिए । देवराज इन्द्रले लक्ष्मीको स्तुति गरेपछि धनकी देवी लक्ष्मी खुशी भएर इन्द्रलाई द्धादशाक्षर मन्त्र दिनको तीनपल्ट पाठ गर्न..
Results 1994: You are at page 22 of 67